Tsika nemagariro enharaunda yechiPutukezi | Absolut Kufamba
Susana Maria Urbano Mateos | | Putugaro
Nemakore anopfuura mazana masere enhoroondo, Portugal ndiyo imwe yenyika dzekare pasi rese. Mumazana emakore ese, tsika dzakasiyana dzechiPutukezi uye hunhu hwakasimbiswa, izvo nhasi zvinotsanangura nzanga yavo nenyika yavo munzvimbo dzakasiyana siyana.
Kubva gastronomy kubva pawaini, hunyanzvi uye umhizha kusvika mimhanzi, all mitambo yakakurumbira uye mafambiro, pane zvikonzero zvinoverengeka zvekushanyira nyika ino yakanaka.
3 Mhemberero dzakakurumbira uye mafambiro
4 Unyanzvi uye umhizha
Portugal yagara iri nyika ine tsika yakakura yekubika. Chimwe chezvikafu zvekutanga zvakamira pane yechiPutukezi gastronomic chiitiko yaive kodhi.
Cod yaive mhinduro kumatambudziko evagari kuwana hove nyowani, sezvo hove iyi inogara kwenguva yakareba painochengetwa munyu. Sechikamu chevagari chakange chisina mari yakawanda yekutenga hove nyowani, iyo cod they akatanga kuve nyeredzi yechiPutukezi gastronomy uye, nhasi, chimwe chekudya kwake kwaanofarira.
Kutaura chokwadi, kune nzira churu dzekubika cod: yakabikwa cod, nekirimu, ine nyama yakagochwa, nechingwa chezviyo, nezvimwe, uye ese ari chikamu chetsika dzechiPutukezi gastronomic tsika. Uye zvakanyanya kukosha, kuti inoperekedzwa ne waini yakanaka yechiteshi. Waini iyi inogadzirwa mumapurazi mu Douro waini dunhu (dunhu rewaini rekutanga kuzivikanwa pasi rese) uye rakachengetwa mumahwindo, mu Vila nova de gaia.
Tsika dzechiPutukezi dzinozivikanwa zvakare nemumhanzi. Imwe yemhando dzemhando dzemimhanzi muPortugal, uye yakasarudzika pasirese, ndiyo fado.
Iyi mimhanzi genre yakatanga kumira pachena muPortugal muhafu yepiri yezana ramakore rechiXNUMX, asi zvaingova mukati ma30s nema40s ezana ramakore rakatevera ndipo payakawana kuratidzira, kuburikidza nekutepfenyura senge cinema, theatre neredhiyo.
Pane zvinhu zvinoverengeka zvinoisa mucherechedzo werudzi urwu rwemimhanzi senge kushushikana, kusuwa uye kuguma; nezve muimbi wefado, ane nzira yakasarudzika yekupfeka uye kuimba seasina mumwe muimbi wemamwe marudzi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti fado yaifungidzirwa neUNESCO senhaka isingabatike.
Asi haisi fado chete kuti mumhanzi wechiPutukezi unorarama. Imwe mhando yemhando yemimhanzi yenyika ino mimhanzi inozivikanwa.r, iripo mune yakakura nhamba yemitambo muPortugal - masitayera akakurumbira ndeaya Bailinho da Madeira, Malhão uye tendeuka.
Mhemberero dzakakurumbira uye mafambiro
Iyi mhemberero uye mafambiro ezvimwe zvinhu zviripo zvakanyanya mutsika dzechiPutukezi uye zvinowirirana nedzimwe nzvimbo dzataurwa pamusoro, senge gastronomy nemumhanzi.
Zvikamu zvakaita Santo Antonio, San Pedro naSão João and the mafambiro kunzvimbo tsvene ye Mukadzi Wedu weFatima, pakati pevamwe, mamirioni evashanyi venyika nevekunze vanofamba nemumigwagwa yemaguta makuru nemataundi ePortugal, chikamu kana mukuzvipira, vachitamba chinzvimbo chakakosha mutsika dzePortugal.
ari mapato San Antonio, muLisbon, ndiyo yekutanga mitambo mikuru munyika; Ivo vanopembererwa mukati mevhiki yaJune 13, dzimba dzakashongedzwa nebasil, sardini yakakangwa uye chingwa chechibage chinodyiwa uye, sezvo achinzi ndiye musande wemuchato, michato mizhinji inoedzwa kupembererwa panguva yemhemberero idzi.
Como Saint Anthony kubva kuLisbon, zvakare muPorto neBraga muSão João inounza pamwechete zviuru zvevanhu uye zvinonakidza, iri nzvimbo yepamusoro pehusiku kubva 23 kusvika 24 Chikumi; pati yakatambanudzirwa kune mamwe mativi epasi uye inozivikanwa se "Husiku hweSan Juan", umo marimi emoto anotungidzwa kudzinga mashura akaipa.
Uyewo mafambiro kunzvimbo inoera yeMhandara yeFatima vanofamba vanhu vazhinji uye vari chikamu chetsika dzechiPutukezi. Mazuva akakosha ndeaya, pasina mubvunzo, Chivabvu 13, zuva iro kupemberera kwekutanga kweMhandara kuvafudzi vatatu kunopembererwa, mutaundi reFátima muna 1917. Rimwe zuva rakakosha ndiGumiguru 13, iyo inopemberera kuoneka kwekupedzisira kwe Mhandara.
Unyanzvi uye umhizha
Imwe nharaunda yakabuda muPutukezi tsika dzenzvimbo nekufamba kwenguva yaive hunyanzvi nehunyanzvi. Pamusoro pazvose Kubva muzana ramakore rechi17, hunyanzvi nehunyanzvi zvakatanga kuwana kukosha kwenyika, ine kukosha kwakakosha munzvimbo dzakaita seceramics, tapestries, embroidery, zvishongo, pakati pevamwe.
La Tsika yechiPutukezi mumatehwe yakaitika muzana ramakore gumi nemasere uye rave richishandiswa kubva ipapo kumadziro nekushongedza kwemadziro. Vateereri vakaita semabasa echiPutukezi, chitendero uye nevamwe vanoratidzwa pameti. Padanho repasi rose uye repasi rese, iwo makwati anozivikanwa kwazvo pasina mubvunzo ndiwo kapeti Arraiolos, iyo yakasimuka muAlentejo, mutaundi reArraiolos.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika nemagariro enharaunda yechiPutukezi
ruzivo rwaunopa rwakanyanya kunaka
Pindura kuna jgonzález
Ini kunyanya handiifarire nekuti haina kana chinhu, ndine hurombo asi haina kundishandira
Iri orribl raive risina basa iri peji. Kana iwe usingaise zvinhu zvinotishandira zvirinani, usashambadze chero chinhu
Pindura kuna uxa
kuora kwakati vweno nekutuka tuka ATT KRIAS
VAMONOZ A SORIANO ATTE EL KRIAZ ANOGONESA PERROZ PUDRANZE DAMN PUÑALEZ
Zvandinoda hazvibude, sezvo ndine tsika muPortugal uye iwe ukaisa vashanyi pandiri ... HANDINA KUZVITSVAKA.
Pindura kuna lauri
Ndine hurombo asi handizvo zvandiri kuda
Iyo info iyo iyo yawakandipa ini ndinokutendai chaizvo, stamina paraguay c ………… ..
ZVAKANAKA NDAKANGA NDIRI KUROVA PAGE NEZVAKANAKA SUPER NDINOFANIRA IYE NDICHAVA NEMUKANA WOKUFAMBA KUPURUGU
Maguta eCanada ane yakanakisa mamiriro ekunze